Waan ku sii waday gacmaha. Laakiin reer binu Israa'iil ma ay ogayn in wax kasta oo wanaagsan oo iyaga ku dhacay ay xagga xagayga ka yimaadeen ”(Hoosheeca 11: 3 HFA).
Markii aan baarayay kiiskeyga aaladda, waxaan ku arkay xirmooyin sigaar oo duug ah, laga yaabee 60-yadii. Waa la jaray si markaas meesha ugu badan ee suuragalka ah loo abuuray. Waxaa jiray sawir gacmeed ku xiraya seddex-tilmaame iyo tilmaamo sida loo diro. Ma aqaan cida qortay tan ka dib sannadahan oo dhan, laakiin waxay igu xasuusisay odhaah: "Ku qor dhabarka santuuqa sigaarka!" Malaha qaarkiin ayaa laga yaabaa inaad tan ka garataan?
Waxay kaloo i xusuusineysaa in Ilaah qorayo waxyaabo yaab leh. Maxaan ula jeedaa Hagaag, waxaan ka aqrinay isaga oo ku qoro magacyada gacmihiisa. Ishacyaah wuxuu inooga sheegayaa bayaankan cutubka 49-aad buuggiisa.Waxuuna Eebbe ku sharraxay aayadaha 8-13 inuu reer binu Israa'iil ka sii deyn doono maxaabiistii Baabuloon xoog iyo farxad weyn. Xusuusnow aayadaha 14-16. Yeruusaalem waxay ka cabaneysaa: "Oh, Sayidku waa iga tegey, oo waa i illoobay ilaa goorma." Laakiin Sayidku wuxuu ugu jawaabaa: "hooyo miyey illoobi kartaa ilmaheedii? Qalbi ma leedahay qalbigii ay kaga tagi lahayd ilmaha dhashay mustaqbalkeedii? Hadday xitaa ilowday, waligey kugu hilmaami maayo! Anigoo ku daraya magacaaga gacanta ayaan ku qoray. ”(HfA) Halkan wuxuu Ilaahay ku sheegayaa daacadnimadiisa buuxda ee dadkiisa! Ogsoonow inuu isticmaalo laba sawir oo gaar ah, jacayl hooyadeed iyo gacmihiisa wax ku qor, xusuus joogto ah u leh naftiisa iyo dadkiisaba!
Haddaan u sii jeesanno Yeremyaah oo aannu akhrinno oraahda halka uu Ilaah ku leeyahay kan soo socda, bal eega, waxaa soo socda wakhti aan Rabbigu reer binu Israa'iil iyo reer Yahuudahba axdi cusub u dhigan doono, oo aan ahayn axdigii aan awowayaashood la dhigtay oo kale, maalintii aan iyaga gacanta qabtay inaan ka kaxeeyo dalka Masar. maxaa yeelay, iyagu axdigaygii way jebiyeen in kastoo aan iyaga sayidkooda ahaa, ayaa Rabbigu leeyahay. Laakiin kanu waa axdiga aan la dhigan doono reer Israa'iil maalmahaas dabadood, ayaa Rabbigu leeyahay; Waxaan rabaa inaan qaanuunkayga aad u qoto dheer oo aan ku qoro qalbiyadooda, oo waxaan rabaa inaan Ilaahooda noqdo oo ay dadkayga noqdaan ”(Yeremyaah 31, 31-33 Schlachter 2000). Mar labaad Ilaahay jacaylkiisa ayuu u muujiyaa dadkiisa oo mar labaad ayuu si gaar ah ugu qoraa quluubtooda. Laakiin ogsoonow, kanu waa axdi cusub, oo aan la mid ahayn axdigii hore, oo ku saleysan mudnaan iyo shaqo, laakiin xiriir uu la leeyahay gudaha Ilaah wuxuu ku siinayaa aqoon dhaw iyo xiriir uu isagu la yeesho!